အာရုဏ်ဦးနှင့် ရန်ကုန်သောက်သုံးရေအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အာရုဏ်ဦးနှင့် ရန်ကုန်သောက်သုံးရေအကြောင်း
Posted by King on Dec 22, 2011 in Creative Writing, Myanma News, Myanmar Gazette | 13 comments
ဆောင်းတွင်းရဲ့အေးချမ်းမှု၊ လွင့်ပျံလာတဲ့ တရားဓမ္မသံ၊ လွှမ်းဆွတ်အောင် ညို့ငင်နိုင်စွမ်းလောက်အောင် စွမ်းဆောင်မှုပြည့်ဝလွန်းတဲ့ တစ်ချက်ချက် တွန်ကြူးတဲ့ ရွှေဥသြ သံလေးကြောင့် မနက်ခင်း အိပ်ရာထဟာ အေးချမ်း ကြည်နှုး လွမ်းဆွတ်စွာနဲ့ နိုးထ လာခဲ့ပါတော့တယ် … ဒီဇင်ဘာ လူထု အားကစားလ ဆိုတော့ မနက်စောစော လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ဆီသို့ ချီတက် လာခဲ့ပါတော့တယ် …. ကျွန်တော်နေတဲ့ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း အဲသည်ကနေ မအိတုံ ပြောနေကြ ဟုမ်းလမ်း … ပြီးတော့ ရှမ်းလမ်းခေါ် (ဗဟိုလမ်းပေါ့) အဲဒါပြီးတော့ အရင်တုံးကတော့ ၀င်စာလမ်းလို့ ခေါ်တာပဲ အခုတော့ ဓမ္မစေတီလမ်းလားမသိ အဲသည်လမ်းအတိုင်း ပြည်လမ်းအထိ ပြေးပြီး ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကို အသွား/အပြန် ချီတက်လေ့ရှိပါတယ် … ဒီနေ့ဗျာ ၀င်စာလမ်းသို့မဟုတ် ဓမ္မစေတီလမ်းထဲမှာက ဟိုတယ်တွေကလည်း များသလားဗျ … ပြေးရင်း ပြေးရင်းနဲ့ ၀င်စာ ဟိုတယ်ရဲ့ ရှေ့မှာ ရေတွေ စီးနေတာကို သွားတွေ့တယ်ဗျ ဒါနဲ့ပဲ နည်းနည်း စပ်စုပြီး ရေဘယ်ကလာလဲလို့ ကြည့်မိတော့ ဟိုတယ်ရှေ့မှာ ရေပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းဟန်တူပါတယ် ဟိုတယ်ဝင်ပေါက်နားက ကွန်ကရစ်လမ်းထဲက စိမ့်ထွက်နေတာဗျ … မြေအောက် ရေပိုက်လမ်း ပေါက်နေဟန် တူပါတယ် … လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး လာလိုင်းအတိုင်း ပြန်အလာ လမ်းမမှာ ရေတွေဟာ မိုးတွင်းဘက် ရေစီးနေတဲ့အတိုင်း စီးဆင်းနေလိုက်တာဗျာ … ဟိုတယ်ရှေ့တင်မဟုတ်ဘူး ခြံနံပါတ် ၁၁ နဲ့ ၁၇ ကြား လောက်မှာလည်း ကတ္တရာလမ်းဘေးနားမှာ နောက်ထပ် ရေစိမ့်ထွက်တဲ့ အပေါက် တစ်ခု ထပ်မြင်မိတယ်ဗျ … ဒီမှာတင် ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းက လွှတ်တော်မှာ ရေမလုံလောက်တဲ့ အကြောင်းကို တင်ပြတာ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ရတာကိုလည်း သတိရမိသွားတယ် … ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ရေလိုအပ်ချက်တွေက ရှိနေသေးလား ကျွန်တော်မသိပါဘူး … သိတာတစ်ခုက ညဉ့်နက်သန်းခေါင် ရေထတင်ရတာကိုတော့ အမှတ်ရမိသေးတယ် … အခုလည်း ဆက်လက် တည်ရှိနေသလားလိုဆိုတာတောင် မသိအောင်ကို အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့ပြီမို့ပါ …. (ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေကို အ၀ိဇိ တွင်းကနေ မောင်းတင်တဲ့နေရာမှာ သုံးဖြစ်လို့ပါ) ကျွန်တော် မတွေ့လိုက်ရတဲ့ နေရာတွေမှာရော ရေတွေ ဘယ်လောက်ယိုစီးပြီး လေလွင့်ကုန်ပြီလဲ … သက်ဆိုင်ရာကရော မသိကြဘူးလား … ကိုယ့်ခြံရှေ့က ဖြစ်ပျက်နေတာကို မသိကျိုးကျွံပြုနေကြတာလား … ဒါမှမဟုတ် အခုမနက်မှ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမို့ မသိလိုက်တာလား …. ဒီလိုကိစ္စတွေ ကိုယ့်ရှေ့ မှာ ဖြစ်ပေါ်နေရင် ဘယ်ကို အကြောင်းကြားရမလဲဆိုတာ သိသူများရှိရင် ပြောပြကြပါအုံးဗျ
199 ကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါကွယ်
ဒါမျိုး အလေနက်တော သုံးတာမျိုးကြ
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရိုက်ရမယ်ကွဲ့ 
ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့ စည်ပင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးကိုဖြစ်ဖြစ် မြို့တော်စည်ပင် ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနကိုဖြစ်ဖြစ် ဖုံးဆက်ပြောလို့တော့ ရပါတယ်။
ကိုကင်း လို ရေကိုနှမြောတတ်သူကနဲတော့ ဘယ်သူမှ အဖက်မလုပ်လို့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေမှာဆိုရင် လနဲ့ချီပြီး ရေတွေဆုံးရှုံးနေတာတောင်ရှိတယ်။
အနီးနားကလူက စည်ပင်ကို ဖုန်းဆက်.ဒါမှမဟုတ်…ဂျူတီကျတဲ့ ၀န်ထမ်းကို သတိပေးသင့်တယ်ခင်ည..
ဟော်တယ်က.. တာဝန်ရှိသူတွေဘာမှ အရေးတယူမလုပ်တာ အံ့သြမိပါရဲ့..။
နှင်းပွင့်တွေကျပြီး..ပုံနေလည်း.. ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုယ်.. လမ်းသွားသူတွေ အတွက်.. တာဝန်ယူရှင်းပေးရတယ်..။
အခုလို.. ရေပေါက်ထွက်နေတာမျိုးကတော့.. မီးသတ်..မြူနီစပယ်ကို (အနည်းဆုံးတော့) ဖုံးဆက်…အသိပေးကြတာပါ..။
တော်ရုံကိတ်စ ငါနဲ့ မဆိုင်ဆိုပြီး မျက်နှာလွှဲတတ်တဲ့ အကျင့်ကလဲ တာဝန်မယူမှုလို့ပြောရမှာပါ။
မှာရေပိုက်ပေါက်ပြီး ရေတွေထွက်နေလို့လမ်းပျက်စီးလို့ ရပ်ကွက်ကစာတင် တော့ စည်ပင်ကလာလုပ်တာ….လမ်းအလယ်ကိုမဖေါက်
ဘဲလမ်းဘေးက ရေပိုက်ဂျိုင်းဆက်ကိုပိတ်ရင်ရရဲ့သားနဲ့ ရပ်ကွက်ကပိုက်ဆံမပေးလို့ဆိုပြီး နိုင်လွန်ကတ္တရာ
လမ်းမအလယ်ကိုဖေါက်လိုက်တာ စည်ပင်က ခုဆိုအဲ့အပေါက်ကနေ ဂျိုင့်တွေအကြီးကြီးဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီလမ်း
အမှိူက်ကားလုံးဝမလာဘူး။စည်ပင်က၀န်ထမ်းမိသားစုတွေ တွန်းလှည်းနဲ့ အမှိူက်ပစ်ရင် ပိုက်ဆံနဲ့လုပ်စားတယ်။စည်ပင်ခွေးတွေကိုအရင်သတ်………….
များသောအားဖြင့် ဒီမှာက ရေချိုကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပေါပေါများများရနေလို့ တန်ဖိုးမသိတတ်ကြပါဘူး။
အမှန်က သဘာဝကပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြဖို့ သဂျီးပြောသလို campaign လုပ်ဖို့လိုမယ် ထင်တယ်နော်။
ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့ 97% ဟာ သမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာ ၇ှိသတဲ့။ 3% သာ မြေပေါ်မြေအောက်မှာ ရှိသတဲ့။ အဲဒီ3% ထဲမှာမှ 77% ဟာ ရေခဲတာင်ထိပ်ပိုင်းမှာ ၇ှိသတဲ့။ 22% က တော့ မြေအောက်(အ၀ီစီ)ရေ ဖြစ်တယ်တဲ့။ ကျန်တဲ့ 1 % ကတော့ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်းတွေမှာ တဲ့..။ ဒီတော့ ကျွန်မ တော့ တကယ်အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ ရေတွေ ကနည်းနည်းလေးရယ်ပါ.. ။သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် သမားတွေ က Save Water ဆိုပြီး အော်အော် နေကြတာ အလကားတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးနော်..။ ဘန်ကောက်မှာ ရေတွေ ဘာလို့ကြီးလဲ..။ မြေအောက်ရေတွေ သုံးတာ များလို့တဲ့..။ လူတွေအားလုံး အသိဥာဏ် နဲ ဆင်ခြင်ကြရင်ကောင်းမယ်..။
199 က ဖုန်းဆက်ရင် မကိုင်ဘူးလို့ ဂျာနယ်ထဲမှာလား ရွာထဲမှာလည်း ဖတ်ဖူးခဲ့သည့်အတွက် …..
ရေတွေ အလဟသ ဖြစ်နေရတာ နှမျောစရာပါပဲဗျာ .. စည်ပင်ဖုန်းက မသိဘူးဗျ (တော်တော်ညံ့တဲ့ ကောင်လို့ ပြောရင်လည်း ခံရမှာပဲ … VIP ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုပဲ အလွတ်ရတယ် … )
ဂျူတီကျဝန်ထမ်းကို ပြောဖို့အတွက်ဆိုရင် ဟိုတယ်ထဲ ၀င်ရမှာဗျ ဂိတ်မှာ လူမရှိဘူး … ဟိုတယ်ထဲတော့ ၀င်လို့ မဖြစ်ဘူး စိတ်က သိပ်ခိုင်တာ ဟုတ်ဝူးဗျ …
@ ကို comegyi
လှိုင်သာယာတော့မသိဘူးဗျ ရွာမှာတော့ ရေစည်လှည်းနဲ့ တိုက်ရတာဗျ … အခုတော့ ဆည်ရေလွှတ်ပေးလို့ နည်းနည်း အဆင်ပြေတော့ ပြေပါပြီ … ကျန်တဲ့ ရွာတွေ မြို့တွေတော့ မသိဘူးဗျ
@ နှစ်လုံးပြူးနဲ့ သူဂျီးမင်းခင်ဗျ
သူကြီးမင်း ပြောသလို ယူအက်စ်ကမြို့တွေကတော့.. ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုယ်တာဝန်ယူရတာပါ..။
နှင်းပွင့်တွေကျပြီး..ပုံနေလည်း.. ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုယ်.. လမ်းသွားသူတွေ အတွက်.. တာဝန်ယူရှင်းပေးရတယ်..။ယူအက်စ်ကမြို့တွေကတော့.. ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုယ်တာဝန်ယူရတာပါ..။
နှင်းပွင့်တွေကျပြီး..ပုံနေလည်း.. ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုယ်.. လမ်းသွားသူတွေ အတွက်.. တာဝန်ယူရှင်းပေးရတယ်..။ ဒီမှာလည်း ရှင်းကြပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ့တစ်ပါးမသိအောင် ကိုယ့်အမှိုက်ကို သူများရှေ့ သွားပစ်နေတာကတော့ …..
@ ကစ်သို ကိုသစ်ရေ
ဒီမှာက တာဝန်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် တော်တော်များမယ်ထင်တယ်နော် … တာဝန်မယူရဲတာလား … မယူချင်တာလား …. ဆိုတာကနေ စရမယ်ထင်တယ်
တာဝန်ယူရဲပြီး ယူပုံယူနည်းမှန်ကန်စွာနဲ့ ယူတတ်ဖို့လည်း လိုသေးတယ်ဗျ … ကျန်တာတွေကိုတော့ နောက်မှပဲ ပြောတော့မယ်ဗျာ …
ရန်ကုန်မှာတော့ သိပ်မသိပါဘူး အမှိုက်ကားနဲ့ ပတ်သက်ရင် နေပြည်တော်မှာတော့ (ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ နေရာပါ ဒီပြင့်နေရာတွေတော့မသိပါ) အမှိုက်ကားခေါင်းလောင်းသံကြားလိုက်ပါတယ် အမှိုက်ပုံးသွားယူ တဲ့လမ်းတစ်ဝက်မှာ အသံပျောက်သွားပါတယ် .. ဒါနဲ့ အမှိုက်ပုံးနားရောက်တော့ အသံထပ်ကြားရတယ် အမှိုက်ပုံးယူပြီး ပြေးထွက်တော့ အမှိုက်ကား လမ်းထဲက ထွက်သွားပါပြီ …
သဘာဝကပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြဖို့ သဂျီးပြောသလို campaign လုပ်ဖို့လိုမယ် ထင်တယ်နော်။ မမ စကားကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်ဗျ
@ we R one
မသိသေးတဲ့ အချက်အလက်တွေ ဗဟုသုတ ရအောင် ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ
KING … ( ^ _ * )
အန်စာတုံးရေ .. သမ္မတအိမ်တော်ဝင်း(ယခင်) လမ်းကို ဓမ္မစေတီလမ်းလို့ မခေါ်ပါဘူး …ရှင်စောပုလမ်းလို့ ခေါ်ပါတယ် … ဓမ္မစေတီလမ်းကတော့ … ပြည်သူ့ရင်ပြင်ထောင့်က မီးပွိုင့်ရှေ့မျာတင်ဆုံးသွားပါပြီ ။
ဒါကိုခေါ်သလားမသိ……….. ဆိုတာလေး ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ် … လောကကြီးက မတရားဘူးခေါ်မလားပဲ … ။ ပိုနေတဲ့ လူတွေမှာလည်း ပိုလို့ … မရှိတဲ့ လူမှာလည်း လိုလို့ … ။ လှိုင်သာယာဘက်မှာ တချို့နေရာတွေ ရေကြည်မရပါဘူး .. ဒါကြောင့် လက်တွန်းလှည်းသမားတွေနဲ့ စည်ကားနေတာပါ … ။ အ၀ီစိတွင်းတို့ တိုကင်တို့ကထွက်တဲ့ရေတချို့က ချက်ချင်းသုံးလျှင်သာရပေမယ့် … ညအိပ်ရေ ဖြစ်သွားလျှင် အဆီတွေ့ဝေ့ပြီး သုံးမရတော့ပါဘူး … ။ ဒါကြောင့် မသောက်ရဲကြဘူး လက်တွန်းလှည်းနဲ့ရောင်းတဲ့ … ပုံးတစ်ပုံးကို 150 ပေးပြီး ၀ယ်သုံးကြရတာပါ … ။ နွေရာသီရေရှားချိန်မှာတော့ .. တပုံးကို 200ရောင်းပါတယ် .. ။ စက်မှုဇုံဘက်က ရေပိုက်ပေါက်ကို တွန်းလှည်းနဲ့ သွားစောင့်ပြီး ပုံးနဲ့ ဖြည့် ရောင်းတဲ့ လူတွေ .. မနည်းမနောပဲ … ။
တွန်းလှည်းခက တစ်နေ့ တစ်ထောင် ၊ ပုံးခက တစ်နေ့ ရှစ်ရာတဲ့ … တစ်ခေါက်ကို (ပုံးအကုန်ရောင်းရလျှင် ) နှစ်ထောင်နီးပါးကျန်ပြီး တစ်နေ့ကို သုံးလေးခေါက်လောက်ရေလှည်းတွန်းပါသတဲ့ … ။
” ပေါတဲ့နေရာကျတော့လည့်းပေါပေမပေါ့..ရှားတော့နေရာကြတော့လည်းရှားပေမပေါ့…။ ”
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှု ယူနစ် (MIMU) က မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ရေရှားပါး ပြတ်လပ်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေပြ မြေပုံတစ်ခုကို ၂၀၁၀ ခု မေလ ၁၈ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် လိုက်ကြောင်း http://www.reliefweb.int တွင် ဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။